Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka UK oo baadhitaan ku helay Deeqda ay siiso Ethiopia oo dil iyo kufsi loo adeegsado.
Posted by ONA Admin	/ December 24, 2012
Wasaarada Horumarinta iyo Deeqaha Wadanka Boqortooyada Ingiriiska ayaa eedeyn badan iyo maamul xumo loosoo jeediyay ku aadan deeqda ay siiso wadanka Ethiopia oo lasoo xaqiijiyay in loo isticmaalo gumaadka shacabka Ethiopia. Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK oo garabsanaysa qowmiyadaha Ethiopia sida Axmaarada, Oromada, Benshaguulka, gambellaha iyo Qowmiyadaha daga wabiga Omo ayaa olole xoogan ka waday wadanka UK iyaga oo cabashoyin i tus oo i taabsi ah u gudbiyay Haayada Arrimaha Dibada wadanka UK iyo Gudida dabagalka Deeqaha DFID waxaana loo balan qaaday in gudi soo baadha arrimahaas la diri doona. Cabashooyinkan ay jaaliyada Ogadeniya soo gudbisay waxaa garab socday BBC News Night oo caddeymo muuqaal ah soo gudbisay.
Hadaba Wasaarada Horumarinta iyo Deeqaha Wadanka UK (Department of Aid and Development DFID) Waxay u dirtay wadanka Ethiopia gudi soo baadha arrimahaas oo soo xaqiijiyay in Taliska Ethiopia uu lacagaha faraha badan ee ay ka hesho wadanka UK ay u itsicmaalan xasuuqa leh kufsiga dilka iyo cadaadinta shacabka Ethiopia. Horaanti sanadkan Januray 2012 Dood lagu qabtay Guriga Baarlamaanka Wadanka UK ayaa su’aalo badan laga weydiiyay Haayada Deeqaha ee wadanka UK lacagaha ay siiso Ethiopia iyo waxa ay ka ogyihiin in lacagahaas loo adeegsado arrimo siyaasadeed.
Waxaa kale oo la xaqiijiyay in Haayada DFID ee deeqaha u qaabilsan wadanka UK ay qeyb weyn ka tahay Barnaamijka magaaleynta ee (Rural Villagization) barnaamijkaas oo inkabadan 1.5 million oo dad ah lagaga raray dhulkoodi aya daganaayeen meelo kalena loo raray. Barnaamijkan Vilagization oo ah mid kasoo horjeeda xuquuqda bani aadamka ayaa waxaa laga fuliyay dhulka Ogadeniya iyada oo inkabadan 200,000 qoys laga raray dhulkoodi ay daganaayeen loona raray meelo aysan aqoon u laheyn. Dadkaas oo si xooga looga qaatay dhulkii ay ku noolayeen islamarkaasna dhulkoodi lagu wareejiyay shirkado shisheeya ah.
Lacagta deeqda ay bixiso DFID ee ku aadan PBS Funding ayaa hadda ka hor haayada Xuquuql insaanka ee Human rights watch ay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in lacagtaas si toos ah loogu adeegsado mushaarada lasiiyo sirdoonka Ethiopia ee ka shaqeeya sidii dadka xoog loogu rari lahaa dhulkoodana loogala wareegi lahaa
Gudidan DFID ayaa hadaba baadhitaankoodi kusoo xaqiijiayay in falal danbiyeed aad u xoog badan ay gumeysiga Ethiopia ay geysato. falalkaas oo isugu jira kufsi baahsan, dil, xadhig iyo cadaadin kale oo jid dil iyo arrimo siyaasadeedba leh. Gudidan ayaa la hadlay taliska Ethiopia sidoo kale waxay usoo gudbiyeen warbixintoodi Haayada DFID iyo wasaarada arrimaha Dibada. Waxayna gudidan baadhitaanka soo gabagabeysay ay sheegeen in ay la wadaagi doonaan warbixintan cidkasta oo wax ka qaban karta waxayna u gudbiyeen warbixinta saxaafada wadanka UK oo saddexdii maalmood ee u danbeysayba lagu soo daawaacayay saxaafada Wadanka UK sida wargeyska Guardian.
Xafiiska raisal wasaaraha ee wadanka UK ayaa cabashadan ay sidoo kale gaadhay maadama ay ka dhantahay qorshaha Raisal wasaaraha ee horumarinta iyo gargaarka midaas oo xisbigiisa ku keeni karta dhaleecayn xoogan.
Markii u horeysay waxaa dowlada wadanka UK gaar ahaan haayada u qaabilsan Deeqaha ay qirtay cabashooyinka ku aadan kutumashada xuquuql insaanka ee ku aadan lacagaha wadankan UK siiyo Ethiopia in loo adeegsado arrimo ka baxsan qorshihii loogu talogalay, iyaga oo sheegaya in baadhitaano wadaan islamarkaasna ay kala hadlayaan taliska Ethiopia. Waxaana socda kiisas xoogan oo lagu daba joogo deeqaha Ethiopia lasiiyo.
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa wada dadaalkeedi ku aadana sidii loo meel marin lahaa in lacagta bilaa xisaabta ah ee lasiiyo Ethiopia looga joojin lahaa. Dhaqaalaha lasiiyo Gumeysiga Ethiopia ayaa ah midka kaliya ee awooda u siisay in ay ku gumeystaan shacabka Ogadeniya islamarkaasna ciidamada ethiopia lagu fangareeyo mana awoodi karaan inay sii heysto Ogadeniya ama uu cadaadis u geysto shucuubta kale ee Ethiopia hadii laga joojiyo dhaqalahaas ay ka helaan wadamada Ree Galbeedka.
Waxii kasoo baxa Baadhitaankaas iyo meesha uu ku danbeeyo kala soco ONA
Xafiiska Ogaden News Agency